घरैबाट अन्तराष्ट्रिय माष्टर कार्ड | EuropeNepal.Net
घरैबाट अन्तराष्ट्रिय माष्टर कार्ड
नेपालबाट ईन्टरनेटमा काम गरेर कमाई गर्न चाहनेहरुलाई एउटा साझा समस्या छ, 'अनलाईन गेटबे' । रुची र सीप भएकाहरुलाई ईन्टरनेटमा कमाई गर्ने...
नेपालबाट ईन्टरनेटमा काम गरेर कमाई गर्न चाहनेहरुलाई एउटा साझा समस्या छ, 'अनलाईन गेटबे' । रुची र सीप भएकाहरुलाई ईन्टरनेटमा कमाई गर्ने धेरै प्रकारका अबसरहरु आईनै रहन्छन् तर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्नको लागी नेपालबाट समस्या हुने गरेको छ ।
Nepal is working offline and earningashared problem is ripe, 'leading getway'. And skills for those who are interested in many kinds of documentation or earnings upon the international level, it can be ainai Subedi, Nepal are the problem in the past.
डिजिटल तस्बिर एवं पेन्ट बिक्रि गर्नुप¥र्यो भने विक्रिबाट आउने डलर कसरी हात पार्ने ? सफ्टवेयर खरिद गर्नुप¥र्यो, अनलाईन विज्ञापन, डोमेन, बेव होष्टिङको शुल्क तिर्नुपरो भने सहज माध्यम के त ? यी लगायत अबस्थामा ईन्टरनेटबाट कारोबार गर्न अनलाईन पेमेन्स बे जरुरी छ, जस्तो पेपल ।
नेपालमा बस्ने नेपालीले पेपल भेरिफाईट गर्न सक्दैनन र सरकारले सहज बनाएको पनि छैन । तर पायोनियर डटकमबाट आवेदन दिएको करिब एक महिना सम्म प्रतिक्षा मात्रै गर्न सक्नुभयो भने घरमै अन्तराष्ट्रिय डेबिट मास्टरकार्ड र बैकं अफ अमेरिकाको बैकं खाता पाउनुहुनेछ, त्यो पनी निःशुल्क ।
पायोनियर के हो ?
पायोनियर अन्तराष्ट्रिय मास्टरकार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी हो । सन् २००५ मा स्थापना भएको यस अमेरिकन कम्पनीले विश्वको २ सय भन्दा वढी देशमा डेबिट मास्र्टरकार्ड उपलब्ध गराउदै आएको छ । ईन्टरनेटमा फ्रिल्यान्सिङ काम गरेर कमाई गर्न चाहनेहरु यसका मुख्य प्रयोगकर्ता छन् ।
अनलाईनबाट प्राप्त हुने रकमलाई बैकं खातामा जम्मा गर्न र आफुसगँ भएको मास्टरकार्ड मार्फत नजिकको एटिएम मेसिनबाट रकम निकाल्न सकिने हुदा यो निकै उपयोगी छ । विश्वभर २० लाखभन्दा वढी यसका प्रयोगकर्ता रहेको पायोनियरको बेबसाईटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैकं खाता र एटिएम
अनलाईनबाटै आफ्नो पुरा जानकारी र कागजात पठाएर भरमै घरमै बसी बैकं अफ अमेरिकाको बैकं खाता पाउनुपनी खुसी कै कुरा हो । तपाईले अनलाईनमा विभिन्न कम्पनी तथा एजेन्सीको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो कमाईलाई बैकं खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै खातामा जम्मा भएको रकमलाई मास्र्टरकार्ड सपोट गर्ने नजिकको एटिएम मेसिनबाट आफुसगँ भएको कार्ड मार्फत रकम निकाल्न सकिन्छ ।
एमाजोन, ईबेलगायत अन्य धेरै साईटमा ईसपिङ गर्न पनी सकिन्छ । पायोनियर एकाउण्ट खोल्न अरुलाई प्रेरित गर्नुभयो भने २५ डलर बोनस पनी पाईन्छ । प्रायः अमेरिकाका ब्याकंले यस्ता अफरहरु सिफारिस गर्ने प्रयोगकर्ताहरुलाई दिने गर्दछ । एक सय डलरभन्दा वढीको कारोबार गरिसकेपछि मात्रै बोनस रकमलाई खर्च गर्न सकिन्छ ।
पायोनियर एकाउण्टबाट पेपल एकाउण्ट भेरिफाई पनी गर्न सकिन्छ । पायोनियरले डेबिट मास्टरकार्ड सगै पठाएको बैकं अफ अमेरिकाको बैकं खाताले पेपल भेरिफाईलाई सहज बनाउनेछ ।
यदि नेपालमा बस्ने नेपालीले बैधानिक रुपमा पेपलको सुविधा प्रयोग गर्न सक्थे भने ईन्टरनेटबाट लगानी गर्न र प्रतिफल लिन सहज हुन्थ्यो । अनलाईनमा कारोबार गर्नेहरु मुख्यत विदेशमा बस्ने आफन्तका एकाउण्टको सहारा लिने गरेका छन् भने अर्को विकल्प नेपालमै भएका त्यस्ता सेवा दिने कम्पनीहरुको सहारा लिदै आएका छन् ।
आफ्नै नाम र ठेगानामा बैधानिक पेपल एकाउण्ट चलाउन पायोनियरले सहयोग पुराउन सक्छ । नेपालमा पेपल एकाउण्ट भेरिफाई गरेर अनलाईन कारोबार गर्न पायोनियरको सुविधा लिने प्रयोगकर्ताहरु पनी बढ्दो मात्रामा छन् ।
कसरी लागु गर्ने ?
पयोनियरको सेवा लिन ईच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस् । पुरा नाम, ठेगाना, जन्म मिति, ईमेल आईडी, बसोबास गर्दै आएको देश, शहर, पोष्टल कोड, पोष्ट बक्स नम्बर, सम्पर्क नम्बर, लगईन आईडी, पासवर्ड लगायत राखेर एकाउण्ट सुरक्षाको लागी सोधिने प्रश्नका उत्तरहरु दिदै कम्फमेसन गर्नुस् । तत्कालै पायोनियरले पठाउने ईमेल पाउनुहुनेछ । ईमेलमा तपाईको जानकारी एप्रुभ हुन केहि दिन लाग्न सक्छ ।
एप्रभु ईमेल नोटिफिकेशन पाएको एक महिना हाराहारीमा अन्तराष्ट्रिय मास्टरकार्ड र बैकं अफ अमेरिकामा खाता खोलिएको जानकारी सहितको लेटर प्याकेज तपाईको हात पर्नेछ । कार्डमा भएको नम्बरले आफ्नो एकाउण्टलाई भेरिफाईड गर्न सक्नुहुन्छ भने कार्ड पाईसकेपछि नागरिकता ( अग्रेजीमा ) वा राहदानीको स्क्यान कपीका साथमा कुन प्रयोजनको लागि पायोनियरको सेवा लिदै हुनुहुन्छ सो विषयमा जानकारी गराएर पायोनियरको सुविधा लिन सकिनेछ ।
पायोनियरले बार्षिक तथा नियमित सेवाको निश्चित शुल्क लिने गर्दछ । यदि मास्टरकार्ड प्रयोगगर्दै गर्दा कुनै समस्या आयो अथवा जिज्ञासा लाग्यो भने सजिलै अनलाईन फोरममा लेखेर वा सिधै फोन गरेर पनी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
यो लेख, आईतबार ९ चैत, २०७० मा अन्नपुर्ण पोष्टमा पनी प्रकाशित छ ।
EuropeNepal.Net: घरैबाट अन्तराष्ट्रिय माष्टर कार्ड